UmkaZuma uqwashise ngesikashukela | Isolezwe
UmkaZuma uqwashise ngesikashukela
Isolezwe / 23 November 2012, 2:00pm /
UNKK Bongi Zuma, uMaNgema eqwashisa umphakathi ngesifo sikashukela emkhankasweni wokunqanda lesi sifo obusesibhedlela iPrince Mshiyeni eMlazi
UMPHAKATHI waseMlazi ubuphume ngobuningi bawo kulo mkhankaso wokuqwashisa ngesifo sikashukela obusesibhedlela iPrince Mshiyeni eMlazi. UDeli Malinga (ophakathi) ongumlingisi omdlalweni iGenerations naye ubeyingxenye yabebehambele lo mkhankaso. Izithombe: MBALI KHANYILE
UMKAMENGAMELI Jacob Zuma, uNkk Bongi Zuma, uMaNgema, uyale abantu ukuthi bayeke ukuzidalela isifo sikashukela ngokungazinakekeli ngendlela abadla ngayo.
Ekhuluma emcimbini wokuqwashisa ngalesi sifo esibhedlela eMshiyeni obuhlelwe yinhlangano yakhe, iBongi Ngema-Zuma Foundation, uthe kunabantu abadla ngendlela engesiyo nabanemikhuba ebabeka ezingeni eliphezulu lokuthi bathole lesi sifo.
“Abantu kumele banakekele indlela abadla ngayo ukuze baqikelele ukuthi abaphathwa yilesi sifo. Lapha eNingizimu Afrika babalelwa ku-4 million abantu okuthiwa banesifo sikashukela,” kusho uMaNgema.
Ugxeke nomama bezingane ngokona ikusasa lezingane zabo ngokuzitotosa.
“Njengoba abantu abaningi sebenengane ngayinye bagcina bephatha izingane zabo njengezithixo. Ingane ayinike yonke into ngisho ingasayilungele njengokuyinika ama-chips namasoseshi ekuseni ivuka noma uma ikhala ayithulise ngokuyithengela ukudla okungenampilo engaboni ukuthi uyisondeza ekutheni ibe sengcupheni yokuba nesifo sikashukela ngelinye ilanga,” kuchaza uMaNgema.
Uthe abanye bakholelwa ekutheni izingane zabo zinempilo uma zinesisindo esiphezulu kanti lokhu akunjalo.
Lo mcimbi bewuhanjelwe ngumlingisi wethelevishini odlala indawo kaSara kuGenerations, uDelisile Malinga.
UDelisile naye onemikhankaso ngesifo sikashukela uthe akumele abantu bafe ngenxa yokungabi nolwazi.
“Kuqala abantu bakithi bebebulawa yisifo sengculazi ngoba bebengenalo ulwazi olwenele ngaso, manje sekungcono ngenxa yemikhankaso kahulumeni. Namanje bekufanele abantu bangabulawa yisifo sikashukela ngenxa yokungabi nolwazi,” kusho uDelisile.
UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo, uthe lesi sifo singesinye seziyinkinga enkulu kuleli.
Uthe kwamanye amazwe lesi sifo asiyiyo inkinga ngoba ukunakekela impilo kuyinto ebekwa phambili.
Ubale utshwala, ukubhema njengezinye zezinto ezibulala abantu kakhulu kuleli wanxusa abantu ukuthi baziyeke lezi zinto.
“Akuqondakali ukuthi yini eyenza umuntu avele asukele ugwayi awubheme noma aphuze utshwala. Mina angithi abantu abehlise utshwala kodwa ngithi ababuyeke kwaphela,” kusho uDhlomo.